Kobcinta shaqada
Astaanta Dhoofinta wiishka Shiinaha
Badbaadadu waa qiimaha aasaasiga ah ee KOYO.Had iyo jeer waxaanu qiimaynaa caafimaadka iyo badbaadada shaqaalaha.
Ballanqaadka iyo mabaadiida
Badbaadadu waxay meel walba kaga jirtaa KOYO alaabta, adeegyada iyo hababka shaqada.Marnaba ma fududayn doono badbaadada ama u tanaasuli mayno arrimaha nabadgelyada.
Shaqaale kastaa waxa uu masuul ka yahay cawaaqib xumada ka dhalata falkiisa iyo wax-qabad la'aantiisa.Waa inaan had iyo jeer ku dhejinnaa muhiimadda weyn ee badbaadada shaqadeena oo aan u hoggaansanno dhammaan xeerarka badbaadada iyo habraaca shaqada.
▶ Ixtiraam kala duwanaanshaha shaqaalaha:
Waxaan ixtiraamnaa kala duwanaanshaha shaqaalaha.
Waxaan aaminsanahay in is ixtiraamka iyo aqoonsiga kala duwanaanta shaqaalaha ay naga caawin doonto gaarista yoolalka KOYO.Waxaan diirada saareynaa abuurista jawi shaqo oo loo dhan yahay si aan sare ugu qaadno awooda shaqaale kasta.
Si loo xaqiijiyo himilada "in lagu sameeyo nolol ka wanaagsan tignoolajiyada cusub, tayada adag iyo adeeg hufan", waxaan aaminsanahay in ixtiraamka kala duwanaanta shaqaalaha ay siin karto qof kasta fursadda ugu wanaagsan ee guusha, taas oo aan u leenahay ballanqaadka ugu adag.
▶ Kala duwanaansho macnaheedu waa kala duwanaansho
Ka shaqaynta KOYO, qofna loola dhaqmi maayo si aan caddaalad ahayn sababtoo ah midabkiisa, midabkiisa, jinsigiisa, da'diisa, dhalashadiisa, diintiisa, nooca galmo, waxbarashadiisa ama caqiidadiisa.
Shaqaalaha KOYO waxay u hoggaansamaan heerarka anshaxa sare waxayna ixtiraamaan xuquuqda iyo sharafta qof kasta, oo ay ku jiraan macaamiisha, shaqaalaha, alaab-qeybiyeyaasha, tartamayaasha iyo sarkaalka dawladda.
Waxaan si adag u aaminsanahay in kala duwanaanta shaqaaluhu ay wax ku kordhin karaan shirkadda.
▶ Xeeladda kartida KOYO
Guusha KOYO waxaa loo aaneynayaa dadaalka dhammaan shaqaalaha.Istaraatiijiyada tayada KOYO waxay qeexaysaa mudnaantayada gaarista kobaca ganacsiga caalamiga ah.
Istaraatiijiyadda tayada KOYO waxay ku salaysan tahay qiyamka asaasiga ah ee shirkadeena waxayna dabooshaa todobada hammi ee kheyraadka aadanaha ee loo dejiyay si loo xaqiijiyo istiraatiijiyadda ganacsiga.
Hadafkayagu waa inaan dhisno koox shaqo oo aad u dhiirran oo heegan ah oo ku tiirsan maaraynta kartida.Waxaan siinaa saddex dariiqo horumarinta shaqada ee shaqaalaha, kuwaas oo kala ah hoggaaminta, maamulka mashruuca iyo khabiir, iyo abuurista jawi shaqo oo soo jiidasho leh oo xiiso leh shaqaalaha hadda jira iyo shaqaalaha mustaqbalka.
Ku Koritaanka KOYO
KOYO waxay ku siinaysaa jagooyin kala duwan oo soo jiidasho leh aduunka oo dhan, haddii aad tahay arday, qalin jabin cusub ama shaqaale leh khibrad shaqo oo qani ah.Haddii aad diyaar u tahay inaad aqbasho caqabadaha, la xiriir dhaqamo kala duwan, oo aad diyaar u tahay inaad ka shaqeyso jawi firfircoon oo xiiso leh, KOYO waa doorashadaada ugu saxsan.
Mustaqbalku gacantaada ayuu ku jiraa!Dhinaca wiishka iyo korashooyinka, calaamada KOYO waxay ka dhigan tahay sirdoon, hal-abuurnimo iyo adeeg.
Guusha KOYO waxay ku xidhan tahay tayada shaqaalaheeda.
Marka lagu daro xirfadaha xirfadeed ee shaqaalaha, KOYO waxay raadisaa, haysataa oo ay horumarisaa shaqaale ku habboon dhinacyada soo socda:
Ku jihaysan macmiilka
Guul ku jihaysan
Horumarka degdega ah iyo waxqabadka muuqda ee shirkadu waxay ka faa'iidaystaan ​​dhaqanka shirkada qoto dheer iyo kooxda kartida fiican, iyo sidoo kale fikradda asaasiga ah ee dadka ku jihaysan.Waxaa naga go'an inaan raadino xaalad guul-guul ah oo u dhexeysa horumarinta ganacsiga iyo kobaca shaqaalaha, oo aan si dabiici ah isugu darno horumarinta ganacsiga iyo horumarinta xirfadda shaqaalaha.KOYO gudaheeda, waa inaadan kaliya ka qayb qaadan tababarka xirfadaha farsamada, laakiin sidoo kale dooro inaad ka qaybgasho koorsooyinka khuseeya baahidaada iyo danahaaga shakhsi ahaaneed.
Tababarkayagu waxa uu u qaybsan yahay shan qaybood: tababbarka soo dhawaynta shaqaalaha cusub, tababarka maamulka, xirfadaha xirfadaha iyo tababarada shahaadooyinka, xirfadaha ka dambeeya, habka shaqada, tayada, fikradda iyo habka fikirka.Iyada oo loo marayo macalimiin dibadda ah iyo tababar dibadda ah, tababar gudaha ah, tababar xirfadeed, tartan, qiimeyn, iyo tababar xirfadeed, waxaan si buuxda u hagaajin karnaa tayada guud ee shaqaalaha.
Horumarinta degdega ah ee shirkadu waxay siinaysaa fursado badan iyo boos horumarinta shaqaalaha.
Barnaamijyada Horumarinta Shaqada:
KOYO waxay had iyo jeer ka fiirsataa aragtida fog ee horumarinta shaqaalaha.Waxaan horay u qiimeyn doonaa kartidaada waxaanan kula shaqeyn doonaa si aan u horumarino qorshe xirfadeed oo kuu ogolaanaya inaad gaarto kartidaada buuxda.Si taas si wanaagsan loo gaaro, qiimeynteena horumarinta sanadlaha ah ee shaqaalaha ayaa ah qodobka ugu muhiimsan.Tani waxay fursad fiican u tahay adiga iyo horjoogahaaga ama maamulahaaga inaad dib u eegis ku samaysaan oo aad qiimeysaan waxqabadkaaga shakhsi ahaaneed iyo waxa laga filayo, ka wada hadlaan meelaha u qalma hagaajinta, oo aad caddaysaan baahiyahaaga tababbarka.Tani kaliya kama caawin doonto inaad sare u qaaddo kartidaada booskaaga hadda, laakiin waxay sidoo kale kor u qaadaysaa inaad horumariso xirfadahaaga iyo khibradaada mustaqbalka.
▶ Codka shaqaalaha:
Qaab dhismeedka mushaharka KOYO wuxuu ka kooban yahay mushaharka aasaasiga ah, gunnada iyo waxyaabaha kale ee daryeelka.Dhammaan faracyada shirkadu waxay raacaan siyaasadda mushaharka ee xafiiska dhexe, taas oo aan tixgelinaynin faa'iidada shirkadda iyo caddaaladda gudaha, laakiin sidoo kale waxay tilmaamaysaa waxqabadka shakhsi ahaaneed ee shaqaalaha iyo suuqa maxaliga ah.
Gunno iyo dhiirigelin
KOYO waxay had iyo jeer u hoggaansantaa gunno macquul ah iyo nidaamka dhiirigelinta.Maaraynta, mushaharka sabbaynaysa waxay xisaabisaa qayb weyn oo dakhliga shakhsi ahaaneed ah.
Heerka mushaharka tartanka
KOYO waxay siisaa shaqaalaha si waafaqsan heerka suuqa waxayna hubisaa tartanka heerka mushaharkeeda iyada oo loo marayo cilmi baaris joogto ah oo suuqa ah.Maamule kastaa wuxuu leeyahay masuuliyada inuu si buuxda ula xidhiidho mushaharka xubnaha kooxdiisa ama iyada oo hoos imanaysa talada waaxda HR.
"Ilaalinta booska halganka waxay caddayn kartaa jiritaanka nolosha"
"Naftayda kor u qaad, ismuuji, oo horay u sii wad KOYO"
"Qalbiga oo dhan ku samee, u noqo sida kuwa daacadda ah"
"Ku raaxayso farxad oo ka goosta hantida shaqada maalinlaha ah"
Ku soo dhawoow inaad ku biirto qoyska weyn ee KOYO, fadlan la xidhiidh Waaxda HR:hr@koyocn.cn